SIG ee Cáceres - Geofumadas
SIG ee Cáceres
Oktoobar, 2009 cadastre, tabo cusub, Microstation-Bentley
Tani waa mid ka mida mashruucyada finalist ee abaalmarinta Noqo 2009 ee qaybta Kacsanaanta iyo Horumarinta Dhulka. Oo waxay kaloo sameeyeen bandhig by Luis Antonio Alvarez iyo Faustino Cordero, la PowerPoint aad u wanaagsan, videos iyo map daabacan. maalinta abaalmarinta aan fadhiistay oo hadlay oo wuxuu ka dhigay markii ugu farxo, iyo waxa uu ka tagay winery ah, extremeño niyadda naxariis lahayn aqoonsan yahay in uu English ku baxeen si ay rigoore la Dutch Tiel in haatan ruxay. Wax kasta oo wanaagsan tahay in la ogaado in mashruuc kale Hispanic u imanayaa inuu foodda ah in lagu dhiirrigeliyo kuwo kale, inkastoo ay u baahan yihiin kooxda si aan hoos ha waardiyayaasha mawduuc aan weligood dhamaado ah.
Faahfaahin ku saabsan Cáceres
Waa hoolka magaalada ee bulshada madaxbannaan Extremadura, kan labaadna wuxuu la mid yahay dadka ugu badan (92,000 deggan) iyo kan ugu ballaaran ee Spain (1,760 Km2). Magaaladan waxaa aasaasay Roomaaniyaanka sanadka 34 AC, waa Waaxda Dhaxalka Aduunka tan iyo 1986.
Laga soo bilaabo Extremadura, mashaariicda teknoolajiyada sida GNULinEX nidaamka hawlgalka ee Linux ka soo baxa. SEXTANTE in ay ku xiran tahay gvSIG waxay leeyihiin ballanqaad aan rajo lahayn oo keliya oo aan ahayn dhexdhexaadinta Isbaanishka.
Warbixin ku saabsan SIG ee Cáceres
Waxaa xiiso leh in wax kasta oo maaliyadeed ay maalgeliyaan golaha magaalada; Ka dib markii sannado 10 ah lagu maalgeliyay meel u dhow 1.3 Milyan Euros. Hase yeeshee xaddidaad kaliya ayaa saamaysay horumarkeedii, maaha wax badan oo helitaanka xogta, laakiin qaabka qalabka iyo habsami u-qaadista Software. Waxaa jira laba xubnood oo shaqaale joogto ah oo loo qoondeeyay mawduuca, oo ay ku jiraan heshiis sanadle ah oo cusbooneysiin ah oo loogu talagalay maamulka mareegta.
Macluumaadka Xogta xogta waa mid qiimo badan, waxay leeyihiin khariidado taariikheed ah oo ah runta farsamada, qorshayaasha habraaca, orthophoto ee sanadaha kala duwan, kuwa dhowaan leh pixel of 10 cm. Inkasta oo Catastro Nacional ay siiso qorshaha, waxay sameyeen sahanno kale oo hore oo waxoogaa macluumaad ah oo ku saabsan heerarka 2D iyo 3D ee degmo kasta.
Software Marka la eego qalabyada: heerka Intranet, kuwa soo saara xogta waxay isticmaalaan Microstation Geographics ama Powermap; Diidmada iyo Awoodda Shacabka mararka qaar. Waayo, dadka isticmaala ee hay'adaha kale, Bentley Redline u muuqataa in ay iyaga siiyey wixii ay u baahan yihiin oo ka soo ............... Publisher daabacay la Geoweb V8.5 oo dhan iyo database a In Access!
Wadar ahaan waxay leeyihiin qaar ka mid ah dadka isticmaala 60 kuwaas oo la falgalaya xogta qallafsan iyo dhawr su'aalood oo online ah oo 200 ah. Heerka macaamiisha, waxay sameeyeen codsiyo VBA ah oo aad u fiican si ay ula tashadaan oo u muujiyaan macluumaadka, qaar ka mid ah kuwan ayaa sidoo kale laga heli karaa internetka.
Hay'ad ahaan. Sababtoo ah macnaha ereyga (Spain), wax badan oo ka mid ah hannaanka daciifnimada ayaa mar horeba laga adkaaday; Waxaan tixraacayaa xasilloonida farsamada, kuwaas oo aan isbeddeleynin sababtoo ah siyaasi xilligan ayaa dareemaya sida oo kale, maadaama ay dhacaan dalal badan oo Isbaanish ah. Tani waxay u muuqataa inay wanaagsan tahay, inkasta oo aanay ahayn wax waliba waa ka qulqulaya, maaddaama maaraynta dhaqaalaha lagu maalgelinayo waaxdu waa inay marwalba noqotaa mid adag.
Xaalad kasta, doorka hay'adda, shuruucda ku jirta iibinta adeegyada, heshiisyada lala yeesho hay'adaha maxalliga ah iyo kuwa qaranka waa mid ka mid ah awooda ugu weyn ee Cáceres SIG.
Daabacaadda. Boggaagu wuxuu bixiyaa xog aad u fiican oo kala soocay kartoonka, waddada iyo qorsheynta. Waxaa jira wax la daabacay oo ku filan, oo ay ku soo socday via Publisher Geoweb: ActiveX dadka isticmaala IExplorer in daalacashada kale waxaa had iyo jeer waa layers geeyo iyo qaabeynta laakiin kaliya sida image ah. Xogta kale waxaa loo isticmaalaa sida pdf.
Daabacaadan Samatabbixinta, inkasta oo la og yahay in ku arkay pelitos for xadeynta ay qalabka iyo khayraadka aadanaha si ay u horumariyaan. Waayo, wax in, ayaa ku guuldareysatay soo mowduuc dynamically in siin lahaa Raalli ahaanshaha xogta, ama qaab la geed keliya oo ka mid ah qaybaha iyo sifooyinkii leexan kaliya noqda ama ku xiran danta, waxa weyn u barbardhigo taariikhiga noqon lahaa.
Caqabadaha ugu xooggan
Gaaritaanka Finalka ayaa si weyn ugu qanacsanaa guurkaas, ma aha guuleysi waa rukumo iyo natiijooyin xaddidan oo laga adkaan karo. Inkastoo aysan sidaas ahayn.
Maaraynta khayraadka dhaqaalaha. Waxaa laga yaabaa in tani ay tahay GIS ugu xoogan ee tartan Caceres, waa lagu naalloon karo wixii ay sameeyeen oo kaliya saddex qof, laakiin waxay u baahan doonaan in la helo albaabada si ay u maareeyaan kaalmada kasta. Waxaan u maleynayaa in la siyaabaha loo sameeyo heer Midowga Yurub, laakiin waxa macno ma in uu ordo iyo diyaariyo qorshe in tilmaamaysaa sida loo sameeyo tallaabooyinka si tartiib ah in ay miisaamaan u dhexeeya isagoo xog dheeraad ah, waxay bixiyaan adeegyo dheeraad ah ama la abuuro jiritaanka qabtay.
Waxay noqon doontaa lagama maarmaan in la fadhiisto geofumar ee jawigaas, wakhtigii aan ku hadalnay waxaanu ka fikiray fursadaha sida isku xirnaanta casriyeynta teknoolojiga si loo helo mashruuc cusbooneysiinaya adeegyada iyo canshuur bixiyeyaasha; waxa macnaheedu noqon lahaa maalgelinta lacag caddaan ah oo lagu cusbooneysiiyo noocyada canshuurta qaarkood ee aan la bixinin sida ay tahay inay noqdaan iyo qayb ka mid ah ururintaan waxaa lagu maalgeliyaa waaxdaas.
Cusboonaysiinta tiknoolajiyada. Tani naftayda Way i cabsiisaa, laakiin waa in la sameeyaa si dhakhso ah ama waqti dambe; Ma aha sababtoo ah waa fadlan, laakiin sababta oo ah u ogolaanaya in ay aad u badan ayaa burburtay ay sii wadi karto. Ka beddel diiwaanka Access to Oracle, laga bilaabo Geographics ilaa Bentley Map, laga bilaabo Geoweb Publisher ilaa Geospatial Server V8i, ma ahan oo keliya in la cusbooneysiiyo ruqsadaha sababtoo ah waxay saameyneysaa isku-xirka xogta, dib-u-habeynta horumarinta iyo jeex-jeexitaanka waxyaabo badan oo isbeddelay sannadahan. Waxay sidoo kale lagama maarmaan noqon doontaa in la tixgeliyo maareynta xogta ka fiican ee xogta, la xidhiidha macaamilada si looga fogaado edebta gacanta ama u nugul macluumaadka.
Waxaa cad in tiknoolajiyada cusubi ay siin karaan fursad ay ku xirmaan oo u adeegaan xogta OGC, waxay maamulaan oo adeegaan tayada tayada leh, laakiin go'aanka waa in la cabbiraa sababtoo ah shirkad-yahanka xubinta golaha noocan ah ma aha mid ku qanci karo.
Ujeeddooyinka. tartan Tani ayaa weli for golaha, maxaa yeelay, waxaa jira fara badan oo shaqo ah ma adkayn karaa waxa ay hore u leedahay iyo sharaf ah in Maxacalin in 2009 ee la waxyoonay, xasiloonida guud ahaan waa sida ay halkaas ka fariisto joogi. Laakiin iyadoo la rajaynayo 2016 noqdo Capital Yurub ee dhaqanka, haddii aan dareen uusan ii khiyaanayn, sidaas guys waxay leeyihiin in iyagoo indhaha ku haya ... ay laga yaabaa in guusha ay la waxyoonay ee 2011.
Abaalmarinta abaalmarinta looma gudbin karo goobta istiraatiijiga ah, Spain waxay noqon kartaa mid soo jiidasho leh laakiin inta badan juryiintu waxay ka kooban tahay takhasusayaal AEC shirkadaha gaarka loo leeyahay, jaamacadaha, joornaalada ama warbaahinta internetka. Xubnaha 20 ee xeerbeegtani sanadkan waxay ahaayeen:
Magazine Magazine Mike Woolf
Dirista Warbaahinta -Sisi Zlatanova
ENR -Hawaar bixiyaha
Calpoly -Maxkamada Fiske
Kooxda La Talinta ee Arc
Ka dib markii ay arkeen mid ka mid ah kormeerka ay sameeyeen bandhigga iyo shuruudaha qaarkood oo lagu dabaqay jariidada noocan ah ee tartanka, fikradda cusub (tafsiirka) ee tiknoolajiyada waxay saameyn ku yeelatay abaalmarinta, tan iyo sannadkii hore 5 (2004) mashruuc uu soo bandhigay horumarka sifooyinka sida:
Naqshad farabadan, database-ka Oracle, maamulka macaamilka 100% web.
Maamulka socodka ay gacanta ku saleysan doorarka, lala ProjectWise ka dhisayaan maps-jaridda xogta weyn, iskaanka iyo buugaag jir bixiyay, ka saaciday inay si rikoor ah cadastral, xirashada Diiwaanka Land ah (oo ay ku jiraan dokumentiyo muujiyaan iskaan) iyo dayactirka baahida loo qabo.
Microtation Geographics 8.5 laakiin leh codsiyada VBA si aad u geliso xml ee dgn iyadoo la isticmaalayo XFM (ka hor in Bentley Map ay soo baxday)
Daabacaadda VPR oo leh mowduucyo laga soo qaaday xogta noolasha ee Geoweb Publisher
Codsashada dayactirka cadastaroolka ee la socota API-ka casriga iyadoo loo marayo dadka isticmaala xuquuqda la xakameeyey.
Dayactirka Kadastral ee ka socdo macaamil ganacsi, oo kor u qaaday macaamilka Geographics, ka soo bixitaanka khariidada ka soo macaamiisha ugu weyn, ka dib markii isbeddelku taariikhda ee dgn iyo soo celinta jeeg-in la sii wado xakamaynta versioning.
Jadwalka nadaaminta ee si otomaatig ah iyo dib-u-sameynta miisaaniyada kala duwan, oo ay ku jiraan daabacaadda, raadinta faylasha la dayactiray.
Deegaanka mashruucani aad ayuu uga duwanaa, wuxuu ku orday amaahda Baanka Adduunku, iyada oo xuduudaha hay'adaha ay sabab u tahay xaddiga, taas oo wali la dagaallamaya. Kharashka horumarintaasi wuxuu ahaa $ 270,000 (Laga reebo liisan), xaq ka hor mashruuc in looga baahan yahay heerka maquila hawlo ka dhalatay howlgal ka cadastral heer dalka iyo casriyeynta ee Diiwaanka Land ka mid isbeddelkaas Folio dhabta folio.
Post Previous«Previous Abaalmarinta 2009
Post Next koorsooyinka GvSIG ee ValenciaNext »